Vanyori veSpanish: mienzaniso yepeni yechikadzi yeSpain | Zvazvino Zvinyorwa
Nguva zhinji isu tinopa kuzivikanwa kukuru kune vanyori vepasirese kupfuura vanyori veSpanish, uye izvo zvinoitika kwatiri mumapoka ese. Izvo chete kana munhu wechiSpanish atanga kuzivikanwa kunze kwenyika kuti isu tinozviteerera zvakanyanya
Saka nhasi tave kudanana tarisa pane vese vanyori vakuru veSpanish, kubva pakutanga, kubva ikozvino, kubva mune ramangwana, raunofanirwa kunge uine mukuona kwako, rutsigiro uye pamusoro pezvose ziva mabasa ake. Iwe unoda kuziva ndiani watiri kutaura nezvake?
1 Vanyori vakakura veSpanish vaunofanira kuziva
1.3 Dolores Round
1.6 Emilia Pardo Bazan
1.8 Vanyori veSpanish: Gloria Fuertes
1.10 Vanyori veSpanish: Ana María Matute
1.11 Vanyori veSpanish: Espido Freire
1.12 Elvira akanaka
1.13 Vanyori veSpanish: Eva García Sáenz de Urturi
Vanyori vakakura veSpanish vaunofanira kuziva
Isu tinokuyambirai pachine nguva kuti hatigone kutumidza vese vanyori veSpanish vanokodzera kuve pachinyorwa, nekuti hatingazombopera, uye tinokuzadzawo neruzivo rwakawanda. Asi isu tine rakakura rakakura gap kukuudza nezve rimwe sarudzo yakanaka yevanyori yausingafanire kurasikirwa nayo.
Almudena Grandes munyori arikubudirira parizvino uye hazvishamise. Mabasa ake akatarisana nerinovhero runyorwa, asi chokwadi ndechekuti akabata mamwe marudzi asina kujairika, senge erootic, ane Mazera aLulu. Rimwe remabasa ake achangoburwa ndiVarwere veChiremba García.
Anenge ese mabasa ake anotarisana nenguva dzenhoroondo. Uye ndiye iye akadzidza Geography uye Nhoroondo (akamanikidzwa naamai vake, hongu).
Iye anotora chikamu mumapepanhau evatapi venhau, senge muEl País, kana muredhiyo, muCadena Ser.
Mumwe wevanyori veSpanish waunofanira kuchengeta mundangariro ndiMaría Dueñas. Iro zita rinogona kunge risingazivikanwe kwauri, asi zvirokwazvo kana tikati "Nguva iri pakati pekusevha", zvinhu zvinoshanduka, handiti? Kunyanya yekugadzirisa kune akateedzana akaitwa.
Zvakanaka María Dueñas ndiye munyori waro uye ndiye mumwe wevanonyanya kukosheswa kwete kwete chete munyika, asiwo nepasi rese.
Parizvino, rimwe remabhuku ake achangoburwa ndere "Vakaputeni veKaputeni", asi zvirokwazvo mamwe akawanda achasvika (kunyange hazvo izvozvi kuchinjika kweimwe yenoveli dzake, La tempelanza, iri mupombi.
Kana iwe ukaenda kuNetflix ukatsvaga iyo Baztán trilogy, iwe unowana matatu mafirimu aive akabudirira kwazvo. Huye, iwo mafirimu akavakirwa pane trilogy yakanyorwa naDolores Redondo. Uyu munyori wechiSpanish zvakare anokunda mubairo wePlanet (iyo kubva gore ra2016) kwaakaunzwa neZvese izvi ini ndichakupa iwe zvakavigwa mune zita rekunyepedzera (zvekuti hapana anoziva kuti aive iye).
Akagara achida kuve munyori (pazera remakore gumi nemana), kunyangwe muchokwadi akazozvipira kune gastronomy. Yakanga iri chinguva mushure mekunge adzokera ku "kurota kwake kwechokwadi."
Iwe unogona kusamuziva zvakanyanya nezita, asi unomuziva nemabhuku ake, kunyanya na "El Último Catón", bhuku rakave nekubudirira kukuru kwenyika. Zvisinei, Zvisinei nekubudirira kukuru uku, chaicho (uye chakanyanya kuzivikanwa) chaive ne "Akarasika Mavambo."
Gare gare akaenderera mberi nekunyora mabhuku, senge "Kudzoka kweCaton", kwaakadzoka kuzonunura mukurumbira wepasi rese uyo waakange apihwa yapfuura. Parizvino zvakare inotora chikamu mune mamwe midhiya, kunyanya venhau.
Rosalía aive mumwe wevanyori vakuru veSpanish vataive navo munyika yedu. Akararama kubva muna 1837 kusvika muna 1885 uye aive Nyanduri wechiGalician uyo achiri kurangarirwa nanhasi. Iye haazivikanwe sevamwe vadetembi vechirume (avo vakapihwa kumwe mukurumbira), asi haana chaanovaitira shanje.
Chii chatinogona kukurudzira nezvake? Zvakanaka, nziyo dzeGalician kana Follas novas.
Zvakare kubva muzana ramakore rechi1851 (XNUMX), munyori uyu, Countess waPardo Bazán, Aive mutori venhau, munyori wenhau, mukadzi, mudetembi, mushanduri, purofesa, nezvimwe zvakawanda. Aive mumwe wevakadzi vakakwanisa kupinda muRoyal Spanish Academy.
Akafa muna 1921 uye akatisiira mabasa makuru, senge Los pazos de Ulloa.
Carmen de Burgos akaberekerwa muAlmería (kunyanya muRodalquilar) uye paakasiyana nemurume wake akaenda kunogara kuMadrid. Ikoko aive mutori wenhau uye munyori. Uye kunyangwe aifanirwa kushandisa zita rekunyepedzera (Colombine) mune zvimwe zvinyorwa kana mabhuku, chokwadi ndechekuti Aive mumwe wevakadzi vakuru vakapwanya furu.
Kune akawanda mabasa nemunyori, akadai se "Mukadzi anonakidza", "Akashatiswa naJaca", "Unyanzvi hwekuve mukadzi (runako uye kukwana)", "Kupera kwehondo" ...
Vanyori veSpanish: Gloria Fuertes
Gloria Fuertes ndomumwe wevanyori vanozivikanwa veSpanish, kunyanya mumhando yevana. Zvinotogoneka kuti iwe une bhuku izvozvi pakati pevaya vari mukamuri revana vako (kana uinaro, kana usina chokwadi chekuchengeta rimwe kubva paudiki hwako).
Iwe unofanirwa kuziva kubva kumunyori uyu kuti Aive akazvidzidzisa-ega uye akanyora zvese zvinyorwa zvevana, izvo zvaanozivikanwa kwazvo, pamwe nevakuru mabhuku (izvo hazvizivikanwe kune vamwe). Uye zvakare, akaita nhanho dzake dzekutanga mukunyora kana kunyora kwemagazini.
Uyu munyori aive neruzivo. Uye ndizvozvo, Pa 23, akange atohwina mubairo weNadal Novel. Haana kunyora zvakanyanya sevamwe vanyori, asi kune mamwe mabasa aunofanira kufunga nezvazvo, mukuwedzera kune iwo unohwina mubairo, Hapana.
Vanyori veSpanish: Ana María Matute
Uyu munyori, akadomwa semunyori wenhau wepamusorosoro mushure mehondo, akatisiira mazita akadai saVakanganwa Mambo Gudú kana Yekutanga Yekuyeuka, mabasa maviri akakosha. Zvanga zviri nhengo yeRoyal Academy yeTsamba uye akahwina mibairo mizhinji.
Zvinosuruvarisa, akashaya muna 2014.
Vanyori veSpanish: Espido Freire
Munyori uyu anobata zvinyorwa zvekuve iye munyori mudiki kuhwina mubairo wePlanet (Makore makumi maviri nemashanu). Iyo novel yaive Frozen Peaches uye iri rimwe remabasa ake akanakisa, kunyangwe akawanda akazouya gare gare.
NaElvira Lindo, rimwe remabhuku awakamboverenga nderaManolito Gafotas, handiti? Zvakanaka munyori uyu aita zvese, kwete zvinyorwa zvevana nevechidiki chete, asiwo terevhizheni uye firimu script. Parizvino ari kushanda muEl País.
Vanyori veSpanish: Eva García Sáenz de Urturi
Iye ndomumwe wevanyori veSpanish uyo ari kupa zvakawanda kuti ataure, kunyanya mushure meratidziro yeguta jena, mabhuku matatu anomhanya-mhanya ausingakwanise kupotsa (naivowo aive mavambo emunyori uyu).
Kune izvo isu tinofanirwa kuwedzera kuti ndiyo anokunda mubairo wePlanet 2020 naAkitaine.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Zvazvino Zvinyorwa » Literature » Vanyori » Vanyori veSpanish
Benito Olmo. Kubvunzana nemunyori weThe Big Red
Iyo saga yeRings saga